Mogadishu Journal » 2018 » July » 11
Xulka Croatia oo uga badiyay 2-1 xulka England una soo gudbay ciyaarta finalka
Xulka Croatia ayaa markii ugu horeysay u soo gudbay kulanka kama dambeysta ah ee tartanka ciyaaraha adduunka kadib markii ay 2-1 uga badiyeen xulka England waxaana ay la ciyaari doonaan xulka Faransiiska ciyaarta kama dambaysta ah. Xulka Ingiriiska ayaa daqiiqadii 5aad waxa ay...
Xildhibaannada Golaha Shacabka oo fasax galay
Mjournal :-Guddoomiyaha Golaha Shacabka Baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan ayaa xildhibaanada Golaha Shacabka ku wargeliyay in kalfadhigii Saddexaad ee Baarlamaanka uu xirmay 10-kii bishan July oo shalay ku beegneyd. Shalay ayay qorshaha aheyd in Madaxweynaha...
Wasiirka Arrimaha Dibadda Dalka oo hadal ka jeediyay Shirka Iskaashiga Shiinaha iyo Wadamada Carabta
Mjournal :-Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Axmed Ciise Cawad ayaa Khudbad ka jeediyay shirka Sideedaad ee Madasha Iskaashiga Shiinaha iyo Carabta ee lagu qabtay Aqalka Shacabka ee Caasimadda Beijing ee Dalka...
Mjournal :-Dowladaha Ethiopia iyo Ertirea ayaa Isniinta soo socta dib u furanaya Safaaradahooda Asmara iyo Addis Ababa, taasoo qeyb ka ah xiriirka labada dal u bilowday, kaddib labaatan snao oo dagaalo u dhaxeeyay. Labada dal ayaa isku raacay inay dib u furaan qadadkii...
Mjournal :-Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo oo ka qeyb galay caleema saarka Madaxweynaha dalka Turkiga iyo shirka Madasha Iskaashiga Afrika iyo Shiinaha oo ka dhacay magaalada Jabuuti, ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay. Madaxweynaha ayaa intii uu ku sugnaa...
Mjournal :-Puntland ayaa sheegtay in magaalada Gaalkacyo gaar ahaan qeybta ay maamusho inay ka bilaabeyso hawlgal hub ka dhigis ah, kaasi oo ay sameynayaan Ciidanka isku dhafka ah ee magaaladaasi ka hawlgala. Gudddoomiyaha Magaalada Gaalkacyo ee Puntland Mudane Maxamuud Yaasin...
Somaliland oo ka hadaashay nabadeynta Ceel Afweyn
Mjournal :-Somaliland ayaa qodobbo hordhac u noqonaya dedaallada loogu jiro nabadaynta deegaannada Ceel Afweyn ee gobolka Sanaag oo colaadi ku dhexmartay beelo halkaasi wada ka dega ka soo saartay deegaannadaas. Madaxweyne-ku-xigeenka Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici...
Guddiyada dib u eegista Dastuurka oo sheegay in loo gacan dhaafay howshooda
Mjournal :-Guddiyada dib u eegista Dastuurka ee Labadiisa Gole ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in loo gagacn dhaafay shaqadii loo igmaday ee aheyd dib u eegista Dastuurka KMG. Senator Xuseen Sheekh Maxamuud oo ah Xoghayaha Guddiga Dib u eegista Dastuurka ee Baarlamaanka...
Mjournal :-Al-Shabaab ayaa markii u horeysay war rasmi ah ka soo saaray heshiiskii bishii la soo dhaafay dhex maray Madaxweyne Farmaajo iyo Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya ee ku saabsanaa afar dekadood oo Itoobiya maalgashaneyso. Mahad Warsame oo loo yaqaano Mahad Karateey oo ka mid...
Mjournal :-Labo carruur ayaa geeriyootay, halka labo kalena ay dhaawacmeen, kaddib markii saaka uu gaari ku jiiray degmada Waaberi ee magaalada Muqdisho. Wararka ayaa sheegaya in carruurtan ay ku sii jeedeen Dugsi qur’aan ay dhiganayeen oo ay saaka aroortii u kalaheen, waxaana...
Mjournal :-Wasiirka Gaashandhigga Soomaaliya, Mudane Xasan Cali Maxamed (Amar-dambe) ayaa la kulmay sarkaalka Midowga Yurub siyaasadda dibadda ee bariga iyo Koonfurta Afrika u qaabilsan Eric Galvin ayagoo isku afgartay in Midowga Yurub ay kordhiyaan taageerada Wasaaradda...